Nosamborina tao Getsemane i Jesosy | Tantara ao Amin’ny Baiboly
Efa taorian’ny misasakalina tamin’izay, ary fenomanana ny volana. Ireny i Jesosy sy ny apostoly fa mandalo eo amin’ny Lohasahan’i Kidrona. Nankeny amin’ny Tendrombohitra Oliva ry zareo, ary tonga tao amin’ny zaridainan’i Getsemane. Hoy i Jesosy: ‘Mijanòna eto dia aza matory.’ Dia niala kely an-dry zareo i Jesosy ary nandohalika. Natahotra be izy ka nivavaka tamin’i Jehovah hoe: ‘Aleo ny sitraponao foana no atao.’ Dia nisy anjely nalefan’i Jehovah hampahery azy. Nankeny amin’ny apostoly indray i Jesosy avy eo, dia ireo fa natory ry zareo. Hoy izy: ‘Mifohaza! Tsy tokony hatory ianareo fa efa ho tonga ilay hamadika an’ahy, dia hosamborin’ny fahavalo aho.’
Tonga i Jodasy avy eo niaraka tamin’ny vahoaka nitondra sabatra sy kibay. Fantatr’i Jodasy hoe aiza no hahitana an’i Jesosy, satria efa mpankao amin’io zaridaina io ry zareo. Efa niteny tamin’ny miaramila izy fa hatorony an-dry zareo i Jesosy. Tonga dia nankeny amin’i Jesosy àry izy sady niteny hoe: ‘Manao ahoana Mpampianatra ô!’ Dia nanoroka azy izy. Hoy i Jesosy: ‘Manoroka an’ahy ve ianao nefa hamadika an’ahy?’
Nanatona an-dry zareo i Jesosy dia nanontany hoe: “Iza no tadiavinareo?” Dia hoy ry zareo: ‘I Jesosy avy any Nazareta.’ Hoy i Jesosy: ‘Izaho izany.’ Dia nihemotra ry zareo ka nianjera tamin’ny tany. Hoy ihany i Jesosy: ‘Fa iza ho’aho no tadiavinareo?’ Dia namaly ry zareo hoe: ‘I Jesosy avy any Nazareta.’ Hoy i Jesosy: ‘Efa hoe izaho ho’aho izany, fa avelao handeha ireto namako ireto.’
Taitra be i Petera ka nasiany tamin’ny sabatra i Malko, mpiasan’ny mpisoronabe, dia niala ny sofiny. Nokasihin’i Jesosy anefa ny sofiny dia sitrana. Dia hoy i Jesosy tamin’i Petera: ‘Ampirimo iny sabatra iny, fa raha mampiasa sabatra ianao dia ho fatin’ny sabatra.’ Nosamborin’ny miaramila i Jesosy avy eo, ary nofatoran-dry zareo ny tanany. Ny apostoly kosa lasa nitsoaka. Dia nentin’ny vahoaka tany amin’i Anasy, lehiben’ny mpisorona, i Jesosy. Nanontanintaniany teo izy, dia nalefany tany amin’i Kaiafa Mpisoronabe. Ary mba nanao ahoana ny apostoly?
“Eo amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa mahereza! Izaho efa naharesy an’izao tontolo izao.”—Jaona 16:33
Fanontaniana: Inona no nitranga tao amin’ny zaridainan’i Getsemane? Inona no azonao ianarana tamin’ilay nataon’i Jesosy tamin’io alina io?
Vonton’alahelo Izy ka Nivavaka
Nahoana i Jesosy no nivavaka hoe: “Esory amiko ity kaopy ity”? Tsy te ho faty mba hanavotana ny olona indray ve izy?
Nisy Namadika i Kristy ary Nosamborina
Hitan’i Jodasy ny nisy an’i Jesosy na dia tamin’ny misasakalina aza.
Nentina Tany Amin’i Anasy i Jesosy ary avy eo Tany Amin’i Kaiafa
Tena tsy rariny ny fomba nitsarana an’i Jesosy, nefa mody natao hoe ara-drariny.